Luis Suarez: Taageerayaasha Waxa Ay Iigu Ooriyaan Cabsi Ay Iga Qabaan Kaliya. - jornalizem
Luis Suarez: Taageerayaasha Waxa Ay Iigu Ooriyaan Cabsi Ay Iga Qabaan Kaliya.
Weeraryahanka xulka Uruguay Luis Suarez ayaa sheegay in oorintii uu kala kulmay taageerayaasha Millennium Stadium intii ay socotay kulankii guuldarrada 1-0 ay ka soo gaartay Team GB inay keentay cabsi ay ka qabeen awoodiisa.
Suarez ayaa lagu oorinayay mar kasta oo uu kubada taabto intii ay socotay ciyaarta, mana uusan ciyaareynin ciyaartiisii ugu fiicneyd, iyadoo xulka Uruguay laga saaray tartanka kubada cagta ee ciyaaraha Olimbikada.
Laakiin weeraryahanka Liverpool ayaa sheegay inaysan saameyn ku yeelan wixii uu ka helay taageerayaasha Britian, inkastoo uu ku tilmaamay in oorintii ay ku ooriyeen markii la garaacayay astaanta qaranka Uruguay inay aheyd ixtiraam la’aan.
“Waxaan qabaa sababta ay iigu oorinayeen inay tahay inay ka baqayaan inay wajahaan ciyaaryahan sideyda oo kale ah” ayuu Suarez u sheegay suxufiyiinta.
“Waa ay iga baqanayaan, lakiin taas saameyn iguma yeelaneyso. Waa murugoonayaa sababtoo ah waa la inagala badiyay, gurigeena ayaana u laabaneynaa. Dhamaanteen waxaan ku riyooneynay inaan ku guuleysano bilada dahabka”.
“Waxba uma arko in la iigu ooriyo, waa qaadan karaa taas. Lakiin ixtiraam la’aan ayay aheyd in taageerayaasha garoonka ay ooriyaan markii aan isku dayaynay inaan qaadno heesta calankeena. Waxyaabahaas oo kale ma ahan inay dhacaan”.